Pakistan oo dooneysa xanuunjinta Daalibaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dalka Pakistan waxaa laga sameynayaa maxkamad milateri, taasoo la doonayo in la soo saaro dadka ka tirsan Daalibaan. Tilaabandan ayaa ah mid dowladda ku dooneyso iney ku xanuunjiso Daalibaan oo todobaadkii hore 141 oo u badnaa caruur ku dishay Iskuul ku yaalla magaalada Pashawar.
Mar uu ka hadlayey telefishenka qaran ayuu Ra’iisalwasaaraha Pakistan Nawaz Sharif waxa uu sheegay in weerraka lagu qaaday Pashawar uu ahaa mid gilgilay qaranka, loona baahanyahay in la qaado tallaabo culus si buu yiri xididada loogu siibo xagjirnimda.
Talaabooyinkan waxa soo dhoweeyey inta badan dadka reer Pakistan, balse qaar kale ayaa su’aal gelinaya isticmaalka maxkamadaha militariga iyadoo aanay jirin cid madaxbaan oo dhusha kala socon doonta. Qorshahan waxa ku heshiiyey xisbiyadda siyaasada ee Pakistan.
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay